Farfalla FEK-30SS Stainless Steel Electric Kettle (3 Litres) | Buy online | SHOP.COM.MM
Farfalla FEK-30SS Stainless Steel Electric Kettle (3 Litres)
Stainless Steel ကိုယ်ထည်
Farfalla ရေနွေးအိုးတွေက အရမ်းအဆူမြန်လို့ သဘောကျပါတယ်။ stainless စတီးလ်ဖြစ်လို့ သံချေးလည်းလုံးဝမတက်ပါဘူး။ Read more Hide
Farfalla ရေနွေးအိုးက တည်ရတာမြန်ပြီး သံချေးမတက်တဲ့ စတီးရေနွေးအိုးမလို့ စိတ်ချမ်းသာတယ်သုံးရတာ။ Read more Hide
Farfalla အမှတ်တံဆိပ် ရေနွေးအိုးလေးက ရေနွေးအိုးတည်ရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
FEK-30SS ?????? ?????????????????? (3 Litres)
Specifications of FEK-30SS Stainless Steel Electric Kettle (3 Litres)